6-Qorsho oo uu Guardiola doonayo inuu uga Taqaluso Liverpool kulanka CAAWA oo la Ogaaday
Thursday January 03, 2019 - 16:12:00 in Sports by Cabdisalam Siciid
Manchester City ayaa Caawa Etihad Stadium ku marti qaadeysa hogaamiyayaasha Premier League ee Liverpool kulan ku xiran rajada horyalka ee wiilasha Pep Guardiola.
Manchester City ayaa Caawa Etihad Stadium ku marti qaadeysa hogaamiyayaasha Premier League ee Liverpool kulan ku xiran rajada horyalka ee wiilasha Pep Guardiola. (horyaalnews.com) 03 Jan 2019 Haddaba ilo wareedyo u dhow City ayaaSunSportu sheegay 6-qorsho oo uu macalinka reer Spain doonayo inuu uga taqaluso wiilasha Jurgen Klopp.
Haddaba halkaan uga bogo:
1.Man City ayaa cadaadis saari doonta goolhayaha Liverpool Alisson markasta uu kubbada lugta ku qabsado.
Kubbad qeybinta goolyaha reer Brazil ee kal ciyaareedkan ayaa ahayd mid aad u fiican, laakiin Guardiola ayaa aaminsan in la argagax galin karo si uu khalad u galo.
Weeraryahanka Leicester CityKelechi Iheanacho ayaa Goolhaye Alisson khal-khal galiyay oo kubbadii ka dafay isagoona farta ka saaray saaxiibkii Rachid Ghezzal oo dhaliyay goosha oo bannan Bishii September ee la soo dhaafay inkastoo ay Reds kulanka ku adkaatay 2-1
Guardiola ayaana iminka qorsheynaya in labo ka mid ah xiddigihiisa ay ku dhawaadaan markasta uu kubbada lugta ku dhigo Alisson kulanka habeen dambe.
2. Dhanka Goosha kale, Guardiola ayaa ku boorinaya goolhayihiisa Ederson inuu kubbada tuuro ama fogeeyo.
Guardiola ayaa tan u arka sida ugu wacan ee lagu garaaci karo cadaadiska sare saddexda weerarkaRoberto Firmino, Sadio Mane iyo Mo Salah.
Macalinka City ayaa ka doonaya Goolhaye Ederson inuu kubbada dheereeyo uu weerarka u tuuro isagoona ku taageeraya weeraryahanadiisa inay kubbada dilaan ayna gaaraan daafacyada Liverpool.
3. Daafacyada Manchester City ayaa loo sheegay inay qabsadaan saf sare maxaa yeelay Liverpool waxay caado u leedahay inay aalaaba gasho Offside micno la’aan ah.
Salah kaligii ayaa 18-jeer xagaagan galay offside oo calanka loo taagay, Mane 14-jeer, kooxda ayaana guud ahaan gashay 42-jeer.
Guardiola ayaa sidoo kale Goolhaye Ederson ka doonaya inuu ciyaaro dowrka ilaalinta isagoo ilaalinaya kubbadaha sare ee Liverpool.
Tababare Guardiola ayaa Firmino u arko khatarta ugu wayn ee Liverpool wuxuuna doonaya in si dhaqsi leh loo joojiyo markasta uu kubbada helo. Waa ciyaartoyda City sidoo kale loo sheegay inay ku raad joogaan Mane.
4. Guardiola ayaa xilka Koorno tuurista qorsheynaya inuu ka wareejiyo Riyad Mahrez iyo Leroy Sane maadaama ay kuwa liito ahaayeen usbuucyadii la soo dhaafay.
Sida xun ee Koornada loo soo laadayo ayaa ah sabab uu macalinka Man City si waali ah u doonayo inuu ciyaaroDe Bruyne si uu ula wareego waajibaadka Koorno Tuurista.
Qofkii doonaba ha soo qaadee, City ayaa eeganeysa in daafaceeda xoogan eeAymeric Laporte uu ugu dambeyn kubbada haleelo.
5. City ayay u badan tahay in dhibaatada ka heysata garabka Bidix ay ku xaliso Danilo, maadaama uu dhaawac ku maqan yahay Mendy halka uu ganaax qabo Fabian Delph.
Guardiola ayaa doonaya inuu ciyaarsiiyo daafaca reer Brazil maadaama uu ka weerar khatar badan yahay daafaca reer Ukraine eeAlex Zinchenko.
Sidoo kale wuu ka khibrad badan yahay wuxuuna leeyahay xawaaraha uu durba ku soo laaban karo marka ay Liverpool isku daydo inay ciyaarto counter-attack.
Danilo waa daafac ku ciyaara lugta midig laakiin horey ayuu uga ciyaara garabka Bidix, sidaa darteed Guardiola ayaa aaminsan inuu yahay dooqa ugu fiican ee kulan sare oo ceynkan oo kale ah.
6. Ugu dambeyn Guardiola ayaa Weerarkiisa ka doonaya inay noqdaan kuwa arxan daran oo joogta u weerartama isla markaana shabaqa u gaara.
Wuxuu ka doonayaa inay aad u weerartamaan halkii ay isku dayi lahaayeen inay difaacdaan gool ay ku hormareen.
Macalinka reer Spain ayaa ka doonaya xiddigihiisa inay ka run sheegaan aaminsanaantooda weerarka.
Wuxuu ka walaac qabaa in City ay waxbadan nusqaamisay xagaagan wuxuuna ka doonayaa inay weerarka joogteeyaan isagoona qadka dhexe doonaya inuu dib ugu mideeyo xiddigihiisaDe Bruyne, David Silva iyo Fernandinho.